Famerenana: SPC Baamba Gyro 4.0 robot cleaner vacuum amin'ny Alexa | Androidsis
Manadio eo hatrany ny mpanadio banga robot Ao amin'ny tsena ankehitriny, manampy antsika hanatanteraka asa tsy mahafinaritra foana izy ireo, dia ny mamafa sy ny fandroahana trano. Tena zava-dehibe izany mba hisorohana ny alikaola, ary saika ilaina amin'ny trano misy biby toy ny alika sy saka. Izany no mahatonga ny fanatsorana ireo asa ireo amin'ny alàlan'ny teknolojia ho fomba tsara hiatrehana.
Eo am-pelatanantsika ny Baamba Gyro 4.0, robot vacuum cleaner avy amin'ny SPC mifanaraka amin'ny Alexa sy Google Assistant, izay manana rindrambaiko ho an'ny Android ihany koa. Hodinihintsika lalina ity fitaovana vaovao ity izay hanamora ny asa fanadiovana ao an-trano. Raha ny fanazavana, izy io koa dia afaka mamafa ny mop mando amin'ny tany, izay tsara.
Toy ny mahazatra, mamporisika anao izahay hijery ilay horonan-tsary Raha ny tianao dia ny mahafantatra hoe inona ny fahafaha-manao volo sy fikosehana amin'ny fitaovana rehetra, na izany aza, eto izahay dia hamela anao ny masontsivana ara-teknika toy ny fahefana, ny fizakan-tena ary ny toerana misy azy. Raha tsy misy hatak'andro intsony dia hanohy hilaza aminao ny zavatra rehetra ao anatiny izahay, fa aza adino ny mamela Fitiavana ary mizara ny horonantsary raha tianao izany. Azonao atao ny mijery ity rohy Amazon ity.
1 Baamba Gyro 4.0 Famaritana ara-teknika
2 Fitaovana sy famolavolana ilay mpanadio banga robot
3 Ny antsipirian'ny fanadiovana sy ny atiny boaty
4 Mifanaraka amin'ny Alexa, Google Assistant, IFFTT ary maro hafa
5 Mampiasà valiny fanandramana sy fanadiovana
Baamba Gyro 4.0 Famaritana ara-teknika
Araka ny efa nolazainay, Raha ny marina dia handeha hitsangantsangana kely amin'ny famaritana ara-teknika nomen'ny SPC anay hizarana aminao izahay. Marihina fa tsy nahazo antsipiriany lehibe toa ny herin'ny suction, angona tianay hananana izahay ary manasa anao hizara aminay raha fantatrao izy ireo.
modely Baamba Gyro 4.0
My Account Manan-tsaina amin'ny AI
Fomba fanadiovana Snake - Spiral - Corners - Back Home - Manual (mifanentana amin'ny mop rehetra)
Sela Mpandray Hafanana Fisamborana sy fianjerana
Fahaiza-manadio Eo anelanelan'ny 90 m2 sy 120 m2
Kitapo fitsofana 0.5 litera
Kitapo fikosehana 150 ml
Herin'ny tabataba 65 pcs
entana Herin'ny fidirana 100-240V sy output 24V
bateria 2600 mA (eo anelanelan'ny 90 sy 120 m entana)
Fametrahana mandeha ho azy Eny
vidiny Avy amin'ny 249.90 euro
Fitaovana sy famolavolana ilay mpanadio banga robot
Amin'ity tranga ity dia mahita fitaovana manana refy mahazatra isika, X X 42 49,5 13,5 sm noho izany tsy tokony hahita olana amin'ny fitetezana azy isika, mazava fa tsy tafiditra ambanin'ny sofa na ny ankamaroan'ny fandriana izy io, fa tsy mametraka olana, na ny manodidina azy 4 kg ny lanjany. Ho fanampin'izany, tianay fa amin'ny tapany ambony dia nanapa-kevitra ny hametraka takelaka vita amin'ny aliminioma voahidy izay hanamora ny asa fanadiovana izy ireo, amin'ny tranga maro dia misafidy plastika mainty manjelanjelatra ireo marika fa tsy manangona vovoka na aiza na aiza isaky ny fanadiovana, dia mazàna izy ireo mahazo simba sy voarangotra rehefa manadio ny vovoka amin'izy ireo isika. Raha tsy misy fisalasalana, na dia toa tsy tsara tarehy indrindra aza ny aliminioma, dia io no azo ampiharina indrindra (ary mahatohitra mazava ho azy).
Dimensions: X X 42 49,5 13,5 sm
lanja: 4 Kg
Izy io dia manana bokotra eo an-tampony izay misy LED izay mampahafantatra antsika amin'ny volomboasary, maintso sy mena ny momba ny toeran'ny fitaovana, ao anatin'ny bokotra CLEAN izay manampy antsika hampandeha azy io amin'ny tanana. Ao amin'ny faritra ambany dia misy ny kodiarana mihodina, kodiarana roa mihodina izay maharesy ny dingana, ny borosy afovoany ary ny borosy roa amin'ny sisiny, izay apetraka amin'ny visy., noho izany dia tsy mora loatra ny manolo azy ireo, na dia ampidirina am-pahazotoana ao anaty boatin'ny fitaovana aza ny visy anao sy ny tahirinao. Raha fintinina dia mahita fitaovana iray izay tsy te hanavao amin'ity lafiny ity izahay, izany hoe amin'ny lahasa famolavolana, ary manana faritra maro mitovy amin'ny vokatra iLife sy Rowenta ao amin'ny fianakaviana manadio robot ihany.
Ny antsipirian'ny fanadiovana sy ny atiny boaty
Este mpanadio banga misy sivana HEPA ao anatiny io izany dia hanampy antsika hitazona ny ahidrano, tena ankasitrahana izany, ary koa ny borosy afovoany, izay ampidiriny rake miaraka amina profil fanapahana hahafahana manary ny volo izay mamehy azy ka mahatonga azy ho very fahefana mamely ampy. Misaotra an'ity borosy ity izay mialoha ny rafitra fisotroana no ahafahanay mampiasa ny SPC Baamba Gyro 4.0 saika amin'ny faritra rehetra ao an-trano. Amin'ny lafiny iray, ny mop microfiber dia mifanaraka amin'ny tapany ambany amin'ny fitoeran-javatra amin'ny alàlan'ny rafitry ny tabilao, tahaka ny famenoana azy amin'ny lafiny mifanohitra, noho izany amin'ny ankapobeny dia tsy mijaly amin'ny olana amin'ny fiparitahan'ny rano isika.
Borosy fanadiovana lafiny 4x
Borosio amin'ny fanadiovan-tena ny robot
Ity no fomba ahafahantsika manomboka mampiasa ny fomba fanadiovana ananany. Nasongadinay fa tsy maintsy hampiasaina amin'ny alàlan'ny fampiharana SPC IoT izy rehetra, satria tsy manana bokotra fanaraha-maso ilay fitaovana. Manana fanadiovana spiral izahay ho an'ny faritra malalaka, fanadiovana ny jirika amin'ny fomba mivaingana hamafana ireo karazana residu voangona, ary Modely bibilava izay mamorona làlana marani-tsaina hanatsarana ny fanadiovana amin'ny alàlan'ny dingana telo izay hidinany, hampiakarana ary hamoahana vovoka (ankoatry ny fandalovana ny mop raha toa ka efa nampianay) araka ny marika. Nohamarininay fa ity rafitra manan-tsaina ity no mahomby indrindra rehefa manadio raha tsy ny handany fotoana be loatra sy ny fanararaotana ny fahombiazan'ny fitaovana no tadiavinay.
Izy io koa dia manana rafitra Extrapower borosy PRO, izay mihevitra ny borosy fihodinana afovoany, manokana, ny vovoka izay tsy aseho an'ity borosy mihodina afovoany ity dia tsy safidy ho ahy, ary mampalahelo fa mbola vitsy ny eny an-tsena. Zava-dehibe izany indrindra satria raha tsy miborosy ny gorodona isika dia tsy mety indrindra ny mandroso amin'ny lasa ny mop satria mety ho maloto be izy ary tsy ho tonga lafatra ny vokany. Amin'ny lafiny iray, ny Navigation 3.0 Izy io dia misy sensor LED mba hamantarana ny tsy fitoviana, fanaka ary karipetra hanitsiana ny fanadiovana amin'ny gorodona samihafa.
Mifanaraka amin'ny Alexa, Google Assistant, IFFTT ary maro hafa
Ambonin'ny zava-drehetra, ity mpanadio banga ity dia manatrika foto-kevitra izay tsy azontsika hoe tsy eo intsony amin'ny fitaovana hafa mitovy aminy. Marina izany dia mifanaraka amin'ny Alexa ary maro hafa, saingy izany rehetra izany dia noho ny fampiharana SPC IoT azontsika alaina maimaimpoana amin'ireo fivarotana fampiharana mifanentana. Ao anatin'ny rindrambaiko dia ho afaka hampifanindriana mora foana ny fanadiovana banga amin'ny fanarahana azy Ireto misy dingana manaraka:
Izahay dia mamelona ilay mpanadio banga ary mamela ny LED amin'ny toerana mena raikitra
Avelantsika tsindry mandritra ny 5 eo ny bokotra banga mandra-pahatonga azy ho mavo manjelanjelatra
Mandeha amin'ny fampiharana SPC IoT izahay ary miroso amin'ny "manampy fitaovana"
Hifanentana ho azy izy io ary afaka hitantana azy isika izao
Ankehitriny dia mila mampiditra ny serivisy fitantanana sy tsotra izahay "Alexa manala trano", hanomboka hiasa izy io. Na izany aza, tiako ny manasongadina fa nahita olana izahay tamin'ny fampifanarahana ny router Movistar HGU mahazatra, na dia tsy misy rafi-pifandraisana hafa aza. Azo antoka fa ity rindranasa ity sy ity karazana fampifanarahana ity dia tena ankasitrahana amin'ny vokatra misy ireo toetra ireo, tsy misy isalasalana, inona no mahatonga azy ho zavatra mamirapiratra. Na izany aza, heveriko fa sahy ny handeha tanteraka amin'ny fametahana fanaraha-maso lavitra mahazatra hitantanana ny fanadiovan-drivotra (na dia bokotra tokana aza no iasany).
Mampiasà valiny fanandramana sy fanadiovana
Rehefa mampiasa ny SPC Baamba Gyro 4.0 Izy io dia tsy manana fahefana hisoka, fa ampy ho an'ny fampiasana mahazatra, tohanan'ny borosy afovoany izay manarona ny tsy fahampian'ny hery suction, ka ho an'ny gorodona mahazatra ary na dia ireo faritra misy lint sy biby aza dia nanome valiny mahafa-po raha ampitahaintsika amin'ny Ireo mpanadio volo Rowenta sy iLife hanome ohatra iray amin'ny elanelam-bidin'izany. Ho an'ny ampahany, ny rafitra mop dia ampy fa mbola fanampiny tsotra izay tsy hisolo ny mop intsony, na dia manome vokatra tsara amin'ny parquet aza, dia tsy azo lazaina ihany koa ho an'ny takelaka na gorodona vita amin'ny vinine izay mirona tsy mirindra. Manoro hevitra mafy aho ny tsy hampiasa afa-tsy ny vokatra fanadiovana feno rano (tsy misy gels na savoka) hialana amin'ny fizarana rano tsy mitovy.
Amin'ny lafiny iray, manao tabataba anaty, fa tsy latsa-danja noho ireo mpanadio banga hafa. Mazava ho azy, tsy mahasosotra na be mihitsy izany. Ny rafitra kodiarana mihosotra dia azo itokisana mba hisorohana ireo dingana sy karipetra, izay nahitako fahombiazana mihoatra ny tsara ihany koa. Mikasika ny fizakan-tena dia manome kely antsika kely noho ireo 120 minitra nampanantenain'ny mafy orina azy ireo, ary amin'ny fampiasako azy ireo dia teo anelanelan'ny 100 sy 110 minitra ny fizakan-tena, aorian'izay dia miditra amin'ny maody ambany herinaratra izy mandritra ny fikarohana ny seranan-tsambo mora hita.
Tsy manana baiko
Hery azo hatsaraina
Ny zavatra ratsy indrindra amin'ity fitaovana ity dia izany tsy mampiditra remote analog mandritra ny fotoana izay, ohatra, tsy manana fifandraisana Internet isika, na raha ohatra, manana trano somary midadasika isika izay ahafahan'ny fifandraisana WiFi very any amin'ny faritra sasany, izay hijaly ny fampiharana SPC IoT. Ny hery suction koa dia zavatra tsy hay hadinoina hanolorana fanadiovana lalindalina kokoa.
Fanohanana mpanampy virtoaly
Fampidirina miaraka amin'i Alexa, Google Assistant ary ny rafitra hafa dia tena tsara sy mahomby, marin-toetra marimarina kokoa marika tokony hitsambikina amin'ny bandwagon ity hevitra ity. Ny teboka iray hafa manintona dia tsy miatrika vokatra lafo vidy izahay, azonao atao izany 241 ohatra ao amin'ity rohy Amazon ity. Tiako ihany koa ny nampiasan'izy ireo aliminioma teo an-tampony ary manana borosy afovoany izy io.
€239 a €249
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » hevitra » SPC Baamba Gyro 4.0 dia mpanadio banga amin'ny robot miaraka amin'i Alexa sy Google Assistant
Ahoana ny fomba hahazoana faktiora amin'ny fividianana entana amin'ny Google Play